သာဓုခေါ်နိုင်စေရန် (၂ )… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Community & Society » သာဓုခေါ်နိုင်စေရန် (၂ )…	12
သာဓုခေါ်နိုင်စေရန် (၂ )…
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Jan 6, 2015 in Community & Society | 12 comments
သာဓုခေါ်နိုင်စေရန် (၂ )...
သဘာဝရိပ်သာ သို့ Diamondstar Group ( Myamarlar) မှ အလှူ ငွေ…
1 ကိုရဲဇင်သန့် + မဆွေသက်ပိုင် 50,000.00
2 ဦးတင်မောင်လွင် + ဒေါ်ခိုင်နှင်းအောင် မိသားစု 10,000.00
3 မအိအိဟန် 10,000.00
4 ရေမြေ့သနင်း + မိဝါ 10,000.00
5 မအိအိမင်း 5,000.00
6 ဦးနေလင်း 5,000.00
7 မညိုညိုစိမ့် 5,000.00
8 မရည်မွန်အောင် 5,000.00
9 ကိုအောင်မျိုးကျော် 5,000.00
10 ကိုနေလင်းဇော် + မထက်ထက်ဇော် 5,000.00
11 မခင်လပြည့်ဝန်း 5,000.00
12 မယဉ်ဝေပြုံး 5,000.00
13 ကိုကောင်းမြတ် + မခိုင်ဇင်မွန် 5,000.00
14 မမျိုးနှင်းပွင့်ကြူ 3,000.00
15 မဖြိုးစု 3,000.00
16 မငြိမ်းငြိမ်းအေး 3,000.00
17 မငြိမ်းငြိမ်းဟန် 3,000.00
18 မကေခိုင် 3,000.00
19 ကိုအောင်ကျော်မင်း 3,000.00
20 မမျိုးမျိုးဈာန် 2,000.00
21 မသဉ္ဖာ 2,000.00
22 မစုလှသူ 2,000.00
23 မခိုင်စန္ဒာမြင့် 1,000.00
24 မသီရိနွယ် 1,000.00
25 မချိုချိုလတ် 1,000.00
26 မသက်မွန် 1,000.00
27 ကိုသိန်းဇံ + မနီလာဇင် 1,000.00
28 ကိုဟန်ဆွေမြင့် 1,000.00
29 ကိုလတ် 1,000.00
30 ကိုအောင်ဟိန်း + မစုငယ် 1,000.00
31 မမာဂရက် 1,000.00
32 မမိုးပုလဲ 1,000.00
33 ကိုအောင်မျိုးအေး + မငြိမ်းငြိမ်း 1,100.00
34 ဦးစိုးမိုး 500.00
35 ဒေါ်သိန်းသိန်းဝင်း 5,000.00
36 မသဇင်နု 5,000.00
37 မချိုသန္တာဝင်း 2,000.00
38 မခြူးကေခိုင်ဦး 10,000.00
39 မခင်ဆွေမွန်အောင် 10,000.00
40 မစိုးမြတ်သီတာ 2,000.00
41 ဦးသန်းဇော်အောင် မိသားစု 10,000.00
42 ဦးတင်မိုးမြင့် 3,000.00
43 ကိုအောင်ဇော်မိုး + မသန္တာ 5,000.00
44 ကိုဇင်မျိုးမောင် 3,000.00
45 ဦးကျော်ကျော် 3,000.00
46 မဇင်ဝင်းထက် 1,000.00
47 မနွယ်နွယ်အောင် 2,000.00
48 မနှင်းအိဖြူ 3,000.00
49 မနှင်းပွင့် 1,000.00
50 မယမင်း 2,000.00
51 ကိုဖြိုးဝေလင်း 2,000.00
52 မမျိုးဇင်မာ 3,000.00
53 ကိုရင်အောင် 3,000.00
54 မသီရိသွင်နိုင် 5,000.00
55 မခင်ခင်ထိုက် 5,000.00
56 မယုယုဝင်း 5,000.00
57 မမေသံလွင်သောင်း 5,000.00
58 ထွန်းထွန်းဝေ 3,000.00
59 မခိုင်ဇာနွယ် 5,000.00
60 အောင်မြတ်မင်းခန့် 2,000.00
61 မမော်မော်အေး 3,000.00
62 ချမ်းမြေ့ကျော် 1,000.00
63 မဇင်မာသိမ့် 1,000.00
64 မခင်သူဇာ 1,500.00
65 မလဲ့ဝါ 1,000.00
66 မစန်းစန်းဝင်း 3,000.00
67 မမြင့်မြင့်အေး 3,000.00
68 အစော 2,000.00
69 ကိုအောင်ကျော်လင်း 1,000.00
70 ကိုကျော်ကျော်ဦး 1,000.00
71 ကိုဇင်လင်းအောင် 1,000.00
72 မအေးစန္ဒာဦး 500.00
73 မဦးဦး 500.00
74 သန္တာ 1,000.00
75 မခင်ထွေး 500.00
76 မယဉ်မွန် 1,000.00
77 မခင်လေး 1,000.00
78 မမြစောဝေ 2,000.00
79 မသန္တာ (UP) 5,000.00
80 UP Account မိသားစု 5,000.00
81 ကိုမျိုးအောင်ခိုင် + မမေသူ 2,000.00
82 ကိုထွန်းလွင် + မဖြူဖြူမြင့် 5,000.00
83 DD II Acc Group 8,000.00
84 စိုးရွှေစင်ထွန်း 10,000.00
စုစုပေါင်း 325,600.00(သုံးသိန်း၊နှစ်သောင်း၊ငါးထောင့် ခြောက်ရာကျပ်)
Yae Myae Tha Ninn has written 114 post in this Website..
View all posts by Yae Myae Tha Ninn →	Blog
kyeemite says: .အား..ပါးပါး..လိုက်အလှူခံထားတဲ့လူဦးရေက မနဲပါလား…ကိုရေမြေ့ဇွဲကိုတော့ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ
.သာဓု…သာဓု…သာဓု ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟဲ… တကယ်တော့ .. အနော် ပြောသလိုပေါ့… ကိုယ့်ဘာသာဆို မလုပ်ဖြစ်ဘူး… ဦးမိုက်တို့ ရွာက လုပ်ကြတော့ စိတ်ပါလာပြီး လုပ်တာဗျ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ထပ်ပီး သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ပါတယ် အူးလေး….
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… လရိပ် ကျေးဇူးနော်… လာမန့်တာ… ဟိုတလောက ဂျာနယ်မှာ လရိပ်တင်တဲ့ ပုံကို ဘယ်မှာ မြင်ပါလဲ လို့ စဉ်းစားနေတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 660
တညင်သား says: အားကျတယ် ၀မ်းသာတယ် ပီတိဖြစ်တယ် သာဓုလဲ ခေါ်ပါတယ် အလှူမှာပါဝင်သူ အားလုံးလဲ လိုအင်ဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝကြီး ပြည့်စုံနိင်ကြပါစေ ခင်ဗျားးးးး
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေဗျား.. ကိုတညင်သားရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Maung Thura says: သာဓုပါဗျားးးး …. .
တကယ့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလဲ… သာဓုခေါ်မိပါတယ် ကိုရေမြေ့
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ကဲ့ပါ… ကိုသူရရေ… အကိုလဲ နိုင်ရာ ၀န် ၀င် ထမ်းတာပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: သာဓုခေါ်ပါတယ် ကိုရေမြေ့သနင်းရေ….
အလှူခံထားတဲ့လူဦးရေ မနည်းတာလဲ သတိပြုမိပါတယ်…
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါတောင် ရုံးရွှေ့မို့ အလုပ်များနေသေးလို့ ကောင်းကင်ပြာရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 38
Myat Pearl Phyu says: သာဓု
သာဓု ပါ နိဗ္ဗာန်ဆော် ကိုရေမြေ့သနင်းရေ …။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟီး.. အဲလောက်လဲ ဟုတ်သေးပါဘူး… မြတ်ပုလဲဖြူ ရေ… လာမန့်တာ ကျေးဇူးနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.